Roobab ka da’ay gobollada dalka qaarkood | raascasayrmedia.com
← Maamulka Raascasayr State oo Guul Ku Tilmaamay Shirweynihii Beesha Dhulbahante ee kusoo Dhamaaday Magaalada london
Raascasayr State maxaa sababay in lagu dhawaaqo ? (Daawo sawiro Dareenka Dadkaas ) →
Roobab ka da’ay gobollada dalka qaarkood
Roobab lagu diirsaday ayaa 24-kii saac ee ugu dambeeyay ka da’ay gobollada Baay, Bakool, Hiiraan iyo deegaannada maamulka Somaliland, kuwaasoo ku soo beegmay xili ay dalka ka jireen abaaro iyo biyo la’aan.
Roobabka ayaa ah kuwa ay ku farxeen dadka ku nool deegaannada ay ka da’een, iyadoo dhowaan qeybo ka mid ah gobollada dalka laga tukaday salaado roob-doon ah, isla markaana dadku ay ku duceysteen inuu Alle raxmaddiisa u keeno.
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa lagu soo warramayaa inay roobabku saameyn ku yeesheen dadka ku barakacay gudaha magaaladaasi, kuwaasoo aqalladooda ay ka sameysan yihiin baco iyo marooyin la isku xirxiray oo aan u adkeysan karin roobka.
Roobabka ayaa ku soo beegmaya xilli inta badan gobollada dalka laga cabanayo abaaro iyo biyo la’aan, saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada.